नेपालगञ्जमा वडाले नै वितरण गरेको राहत- कुहिएको दाल ! जुम्लाभरि म्याद नाघेकाे नुन वितरण – Everest Pati
नेपालगञ्जमा वडाले नै वितरण गरेको राहत- कुहिएको दाल ! जुम्लाभरि म्याद नाघेकाे नुन वितरण
नेपालगन्ज/जुम्ला, २८ चैत्र । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा न+ १४ मा कुहिएको दाल वितरण गरिएको छ । पहिलो चरणको राहत वितरण कार्यक्रममा वडा कार्यालयले वितरण गरेकाे राहत सामग्रीमा चामलमा कनिका मिसिएको र दाल चाहिँ कुहिएको फेला परेको स्थानीयले बताएका छन् ।
चामल र दाल खराब निस्केको स्थानीय जमाग्री गोडियाले बताउनुभयो । गाउँमा ४-५ वटा घरमा यस्तै दाल र चामल फेला परेको स्थानीयले जनाएका छन् ।
लकडाउनका कारण अति प्रभावित, अति विपन्न, ज्याला-मजदुरी गरी खाने, असहाय, अपांग, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, एकल महिलाहरुलाई छनोट गरी राहत वितरण गरिएको वडा नं. १४ का वडा अध्यक्ष ओमकार नाथ मिश्राले जानकारी दिनुभयो ।
वडाले पहिलो चरणमा ४३५ जनाको लगत संकलन गरेको आधारमा राहत वितरण गरिएको अध्यक्ष मिश्राले बताउनुभयाे । एक घरपरिवारलाई १५ किलो चामल, ५ किलो पिठो, २ किलो दाल, ५ किलो आलु, १ लिटर तेल, १ वटा साबुन, १ किलो नून, वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष मिश्राले जानकारी गराउनुभयो ।
पहिलो चरणमा छुटेका तथा नपाएका नागरिकलाई दोश्रो चरणको लगत संकलन गरि अति विपन्न परिवारलाई पुन राहत वितरण गरिने वडा अध्यक्ष मिश्राले जानकारी गराउनुभयो ।
तर दाल कुहिएकाे फेला परेकाे बारेमा वडाध्यक्ष मिश्रासँग साेध्दा उहाँले बोडी ल्याउँदा केहीमा भेटिएको होला, त्यसमा शंका मान्ने विषय नभएको भताउनुभयो । ‘४ सय ३५ जनामध्ये एक जनामा यस्ताे भेटिएको सुनेकाे छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सयौँमा एकजना गल्ती भेटियो भने त्यसमा खराब सामान वितरण गरेको भन्न मिल्दैन ।’
जुम्लामा बाँडियाे म्याद गुज्रेकाे नुन
जुम्लामा राहत वितरणको काम धमाधम भइरहेको छ । खाद्य संस्थानबाट चामल र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट नुन खरिद गरेर जुम्लाका सबै गाउँघरमा स्थानीय सरकारले वितरण गरिरहेको छ।
तर आयोडिनयुक्त मानिएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट खरिद गरिएको नुन सन् २०१६ र २०१७ सालमा उत्पादन गरिएको र उत्पादन गरेको मितिले २ वर्षसम्म मात्रै प्रयोग गर्नु बेस हुने प्याकेटमै लेखिएकाे छ । यसरी म्याद गुज्रेकाे नुन बाँडिएपछि स्थानीयमा असन्तुष्टि पैदा भएकाे छ ।
यहाँका उपभोक्ताले सामाजिक संजालमा व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । यहाँको हिमा गाउँपालिकाले २३ सय घरधुरीमा प्रति घरधुरी २५ केजी का दरले राहत वितरण गरिरहेको छ।
जनगुनासो बढेपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन नराकोट शाखाले आफूहरुलाई यही नुन दिएकाले साेही नुन वितरणा गर्न बाध्य भएको बताएकाे छ । नुनको विषयमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै बुज्न हिमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोप बहादुर बुढाले आग्रह गरेका छन् ।
यहाँको सिञ्जा गाउँपालिका, कनकासुन्दरि लगायत आठै ओटा स्थानीय तहले यही म्याद गुज्रिएको नुन राहतको रुपमा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सिञ्जा गाउँपालिकाको नराकोट डिपोले यहाँका उपभोक्तालाई पनि यही नुन बिक्री गर्दै आइरहेको छ ।
मिति गएको नुन पनि खानचाहिँ मिल्छ भनेर कसैले भनेका छन् भने कसैले मिल्दैन भन्दै आ-आफ्नो राय प्रस्तुत गरिरहेका छन् । २०१६ र १७ सालमा बनेको नुनको हाल म्याद गुज्रिसकेकाले प्रयोग गर्ने वा नगर्ने विषयमा उपभोक्ताहरु अन्योलमा छन् ।
साल्ट ट्रेडिङकाे यो नुनलाई उपभोक्ताले शंका मानेमा ल्याब परीक्षण गराउन तयार भएको र शंका लागेका उपभोक्ताले नुन प्रयोग नगर्न भनेर डिपोका प्रमुख खगेन्द्र मल्लले गाउँपालिकाहरुलाई पत्र पठाएका छन् ।
तनहुँमा पनि राहतकाे चामल सडेको भेटियाे, बिक्रेतालाई कारबाही गरिने